ASUR: nidina 44.9% ny fifamoivoizana mpandeha tany Mexico, 41.5% tany Puerto Rico ary 67.8% tany Kolombia
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » ASUR: nidina 44.9% ny fifamoivoizana mpandeha tany Mexico, 41.5% tany Puerto Rico ary 67.8% tany Kolombia
Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV ASUR, vondrona seranam-piaramanidina iraisampirenena misy fiasa any Mexico, Etazonia ary Kolombia, androany dia nanambara fa ny fitohanan'ny mpandeha ho an'ny Oktobra 2020 dia nihena 50.1% raha ampitahaina tamin'ny Oktobra 2019. Nihena 44.9% ny mpandeha tao Mexico, 41.5% tany Puerto Rico ary 67.8% tao Kolombia, tratry ny fikororohana mafy amin'ny raharaham-barotra sy ny fitsangatsanganana miala amin'ny areti-mandringana COVID-19.
Ity fanambarana ity dia hita taratra ny fampitahana ny 1 Oktobra ka hatramin'ny 31 Oktobra 2020 ary ny 1 Oktobra ka hatramin'ny 31 Oktobra 2019. Natao an-tsokosoko ireo mpandeha amin'ny zotra sy fiaramanidina ankapobeny ho an'i Mexico sy i Colombia.
Famintinana ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha
Oktobra % Chg Taona diavina % Chg
Meksika 2,478,834 1,365,772 (44.9) 28,262,695 12,914,498 (54.3)
Fifamoivoizana an-trano 1,417,569 923,189 (34.9) 13,784,943 7,056,318 (48.8)
Fifamoivoizana iraisam-pirenena 1,061,265 442,583 (58.3) 14,477,752 5,858,180 (59.5)
San Juan, Pôrtô Rikô 658,632 385,608 (41.5) 7,730,812 3,891,401 (49.7)
Fifamoivoizana an-trano 595,129 374,669 (37.0) 6,910,267 3,640,380 (47.3)
Fifamoivoizana iraisam-pirenena 63,503 10,939 (82.8) 820,545 251,021 (69.4)
Kolombia 1,037,040 333,465 (67.8) 9,844,591 3,155,193 (67.9)
Fifamoivoizana an-trano 886,874 292,305 (67.0) 8,344,540 2,704,278 (67.6)
Fifamoivoizana iraisam-pirenena 150,166 41,160 (72.6) 1,500,051 450,915 (69.9)
Fifamoivoizana tanteraka 4,174,506 2,084,845 (50.1) 45,838,098 19,961,092 (56.5)
Fifamoivoizana an-trano 2,899,572 1,590,163 (45.2) 29,039,750 13,400,976 (53.9)
Fifamoivoizana iraisam-pirenena 1,274,934 494,682 (61.2) 16,798,348 6,560,116 (60.9)
Nanomboka tamin'ny 16 martsa 2020, namoaka fameperana ny sidina ho an'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao ny governemanta samihafa mba hamerana ny fahatapahan'ny virus COVID-19. Mikasika ireo seranam-piaramanidina ASUR dia miasa:
Araka ny nambara tamin'ny 23 martsa 2020, na i Mexico na i Puerto Rico dia samy tsy namoaka ny fandrarana amin'ny sidina, mandraka ankehitriny. Any Puerto Rico, ny Federal Aviation Authority (FAA) dia nanaiky ny fangatahan'ny governoran'i Puerto Rico ny amin'ny sidina rehetra mankany Puerto Rico hiakatra amin'ny seranam-piaramanidina LMM, izay iarahan'ny zanaky ny ASUR Aerostar, ary ny mpandeha rehetra tonga dia arahin'ireo solontena. an'ny Departemantan'ny Fahasalamana any Puerto Rico. Tamin'ny 30 martsa 2020, ny governoran'i Puerto Rico, tamin'ny alàlan'ny didy fampiharana maharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra, dia nametraka quarantine tapa-bolana ho an'ny mpandeha rehetra tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina LMM. Noho izany, ny seranam-piaramanidina LMM dia misokatra sy miasa hatrany, na dia mihena be aza ny habetsaky ny sidina sy ny mpandeha.
Mba hanamafisana bebe kokoa ny fifehezana ny fahasalamana amin'ny fahatongavany, nanomboka ny 15 Jolay, nanomboka nanatanteraka ireto fepetra manaraka ireto ny governoran'i Puerto Rico. Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy misaron-tava, mameno taratasy fanamarihana sidina tsy maintsy atao avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana any Puerto Rico, ary mandefa valiny ratsy amin'ny fitsapana COVID-19 molekiola PCR 72 ora mialoha ny nahatongavany mba tsy hiaretana ny quarantine roa herinandro. Azon'ny mpandeha atao ihany koa ny misafidy ny hanao ny fitsapana COVID-19 any Puerto Rico (tsy voatery ho any amin'ny seranam-piaramanidina), mba hivoahana amin'ny quarantine (tombanana ho eo anelanelan'ny 24-48 ora).
Tany Kolombia, nanomboka ny 1 septambra 2020, ireto seranana ireto dia nanangana sidina ara-barotra ho an'ny mpandeha tamin'ny dingana voalohan'ny drafi-pifaneraserana tsikelikely nambaran'ny Lehiben'ny Aviation Civile: José María Córdova any Rionegro, Enrique Olaya Herrera any Medellín ary Los Garzones any Montería. Ho fanampin'izany, ny seranam-piaramanidina Carepa sy Quibdó dia nanangana indray ny asany tamin'ny 21 septambra 2020, raha ny seranam-piaramanidin'i Corozal kosa dia nanomboka tamin'ny 2 oktobra 2020. Ny sidina iraisampirenena mankany Kolombia dia niverina tamin'ny 21 septambra 2020, na dia voafetra aza izany, tafiditra ao anatin'ny famerenana miandalana. Ireo mpandeha amin'ny sidina iraisam-pirenena ho avy dia tsy maintsy manolotra valiny ratsy amin'ny fitsapana COVID-19 natao tao anatin'ny 96 ora taorian'ny nialàn'izy ireo mba hiditra amin'ny sidina sy hidirany ao amin'ny firenena.
Ho fanampin'izany, ny fifamoivoizan'ny mpandeha any Mexico dia tratry ny rivodoza Delta, izay namely ny Saikinosin'i Yucatan ho rivodoza sokajy 2 ny 13 sy 14 Oktobra 2020. Nikatona nandritra ny 16 ora ny seranam-piaramanidina Cancun nanomboka ny 10 ora alina tamin'ny 00 Oktobra raha nakatona ny seranam-piaramanidina Cozumel mandritra ny 13 ora manomboka amin'ny 22:5 hariva amin'io andro io ihany. Tamin'ny 00 Oktobra 26, ny Saikinosy Yucatan dia voan'ny Hurricane Zeta, tafiotra sokajy 2020. Nisokatra hatrany ny seranam-piaramanidina Cancun, raha ny seranam-piaramanidin'i Cozumel nakatona nandritra ny 1 ora nanomboka tamin'ny 19 ora hariva tamin'ny 5 Oktobra.
Fifamoivoizana mpandeha ao Mexico
Kona Cancun 758,707 591,005 (22.1) 7,462,241 4,091,857 (45.2)
paompy Tapachula 30,110 26,937 (10.5) 299,979 211,259 (29.6)
Kona Cancun 1,011,657 419,731 (58.5) 13,682,731 5,452,097 (60.2)
paompy Tapachula 637 667 4.7 10,932 6,010 (45.0)
Fifamoivoizana totalin'i Mexico 2,478,834 1,365,772 (44.9) 28,262,695 12,914,498 (54.3)
Kona Cancun 1,770,364 1,010,736 (42.9) 21,144,972 9,543,954 (54.9)
paompy Tapachula 30,747 27,604 (10.2) 310,911 217,269 (30.1)
Us Fifamoivoizana mpandeha, Seranam-piaramanidina San Juan (LMM)
Seranam-piaramanidin'ny mpandeha ao Kolombia
Fifamoivoizana tanteraka Colombia 1,037,040 333,465 (67.8) 9,844,591 3,155,193 (67.9)
Delta Air Lines dia mandefa sidina tsy misy entana afa-tsy eo anelanelan'i Etazonia, India ary Eropa